ဘာကွောငျ့ဖောကျပွနျခငျြကွတာလဲ - သြှငျယှနျး - Tameelay
အိမျထောငျရေး . . . တဈခုမှာ အဖွဈအမြားဆုံး ပွဿနာက ဖောကျပွနျခွငျးတှပေဲ ။
ယောကျြားပဲဖွဈဖွဈ မိနျးမပဲဖွဈဖွဈ ဖောကျပွနျရခွငျး အကွောငျးအရငျးတှဟော ဖိုမ သဘာဝနဲ့မဆိုငျဘူး အဓိက က ဗီဇနဲ့ပဲ ဆိုငျတာပါ ။
နှဈဦးသဘောတူ လကျထပျခဲ့တာပဲ ဖွဈဖွဈ . . .ဘာကွောငျ့ပဲ လကျထပျခဲ့ လကျထပျခဲ့ အိမျထောငျတဈခုကို တညျဆောကျပွီးပွီဆိုရငျ ဆကျပွီးမွဲအောငျ ထိနျးသိမျးဖို့ နှဈဦးနှဈဖကျလုံးမှာ တာဝနျတှေ ဝတ်တရားတှေ အပွညျ့ရှိတယျ ။
ဖောကျပွနျခွငျးဆိုတာ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာကော သံသရာမှာကော နှုတျခေါငျးရှုံ့ခငျြစရာ အကောငျးဆုံး လုပျရပျမှာ ။
အိမျက မိနျးမက အရငျလို မလှတော့လို့ ဖောကျပွနျခငျြလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ မလှမပတဲ့ မိနျးမက သူ့ကိုယျသူ ဂရုစိုကျဖို့ထကျ ကိုယျ့အိမျ ကိုယျ့လငျ ကိုယျ့သားကိုယျ့သမီးတှနေဲ့ အလုပျမြားနရေတာကို သတိရပါ လကျထပျခွငျးဆိုတာ . . .
ယောကျြားတဈယောကျအတှကျ ထှကျပေါကျတဈခု ဖွဈကောငျးဖွဈပမေယျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျကတြော့ တဈဘဝလုံး ရငျးနှီးမွုပျနှံပဈလိုကျရတာမြိုးပါ ။
ယောကျြားတဈယောကျ ဘယျလိုပဲ ဖွဈနေ ဖွဈနေ နောကျဆုံး သူ့မိနျးမကိုပဲ ပတျဝနျးကငျြက အပွဈမွငျ အပွဈတငျတတျကွတာမြိုးလေ ။
အဝတျအစားတှေ တောကျတောကျပွောငျပွောငျမရှိတဲ့အခါ အိမျက မိနျးမက မလုပျပေးဘူးလားဆိုတာမြိုး မနကျစာ နလေ့ညျစာ အပွငျထှကျစားတဲ့အခါ အိမျက မိနျးမက ဟငျးခကျြ မကြှေးဘူးဆိုတာမြိုး အမွဲအပွဈပွောဖို့ ခြောငျးနကွေတာပါ နောကျဆုံးအပွဈဖို့ခံရတော့လဲ အိမျက မိနျးမပါပဲ ။
ကိုယျ့ယောကျြားတဈယောကျတငျပဲလား ဆိုတော့ မဟုတျသေးပွနျဘူး ကိုယျ့သားကိုယျ့သမီးတှေ နှဈဖကျ ဆှမြေိုးတှေ အားလုံးရဲ့ တာဝနျဟာ မိနျးမ တဈယောကျခေါငျးပျေါပဲ ကလြာခဲ့တာလေ ။
ဘာလို့ ဖောကျပွနျခငျြရတာလဲ ။ အရငျလို မလှတော့လို့လား အရငျလို မလှတော့တဲ့ အကွောငျးအရငျးက တဈခါတဈရံမှာ သူ့ကိုယျသူတောငျ ဂရုစိုကျဖို့ မနေ့တေတျလို့ပါ ။
အရငျလို ဂရုမစိုကျတော့လို့လား ဂရုမစိုကျတာ မဟုတျပါဘူး အရငျကထကျ ပိုပွီး ဂရုစိုကျပေးခဲ့ပွီးသားပါ နီးလှနျးရငျ မမွငျတတျတဲ့ လူ့သဘော သဘာဝအရပေါ့ ….ထမငျးစားပှဲအပျေါ အမွဲ အသငျ့ရှိနတေဲ့အခါ ဒါဖွဈနကေလြို့ မွငျသှားကွပွီး ကြေးဇူးတငျဖို့ သတိမရတော့ဘူး အဝတျဗီရိုထဲက ခေါကျရိုးကြိုးပွီးသားအဝတျအစားတှကေို အမွဲမွငျနရေပမေယျ့ အဲ့ဒီအနောကျက စတေနာကို မမွငျလာကွတော့ဘူး ။
မိနျးမတဈယောကျရဲ့ အခဈြက . . . ထမငျးဟငျးခှကျတှမှော တောကျပွောငျနတေဲ့ အဝတျအစားတှမှော ဆေးပွီးသား ပနျးကနျတှမှော အစအဆုံးသာ ပွောရရငျ တဈအိမျလုံးမှာ သူ့အခဈြတှေ သူ့စတေနာတှခေညျြးပါပဲ ဒါကို မွငျတတျဖို့ လိုတယျ ။
အိမျမှာနပွေီး ဘာလုပျရလို့လဲ ဆိုတဲ့အတှေးတှေ တှေးမိတဲ့အခါ အိမျမှာ နပွေီး တဈရကျလောကျ ကိုယျတိုငျမဟုတျတောငျ ကူညီပေးကွညျ့ပါ ငါ စီးပှားရှာပေးနတောပဲဆိုတဲ့ အတ်တတှနေဲ့ တဈဖကျသတျ မတှေးနဲ့ မိနျးမတဈယောကျဆိုတာလဲ စီးပှားရှာတတျပါတယျ ။
ဘာကွောငျ့ ဖောကျပွနျကွတာလဲ ။ ငယျရှယျပွီး ခြောမောလှပနလေို့လား ဝတျတတျစားတတျပွီး ခြှဲ့ခြှဲ့နှဲ့နှဲ့လေး စကားတှေ ပွောတတျလို့လား အတိတျကို ပွနျတှေးကွညျ့ပေးပါ တဈခြိနျက ကြှနျမတို့လဲ ဒီလိုပဲ ပြျောဖူးခဲ့ကွတယျ ခဈြလားခဈြတယျဆိုတဲ့ စကားတှနေဲ့ နှဈယောကျတဈကမ်ဘာမှာ ဘာအပူအပငျသောကတှမှေ မပါပဲ စိတျကူးတှေ ယဉျခဲ့ဖူးတယျလေ ။
ဘာကွောငျ့မြား ဖောကျပွနျခငျြကွတာလဲ ။ အိမျထောငျရေးဆိုတာ . . . လှယျလှယျလေးရေးပွီး လှယျလှယျလေးဖကျြပဈလို့ရတဲ့ ခဲတံတဈခြောငျးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရှကျပျေါက စကားလုံးလေး တဈလုံးမဟုတျဘူးလေ ဘဝတှေ ရငျးထားတတျသလို ခံစားခကျြတှလေဲ မွုပျနှံထားခဲ့တဲ့အရာပါ ။
အိမ်ထောင်ရေး . . . တစ်ခုမှာ အဖြစ်အများဆုံး ပြဿနာက ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေပဲ ။
ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ဖောက်ပြန်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေဟာ ဖိုမ သဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူး အဓိက က ဗီဇနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ ။
နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် . . .ဘာကြောင့်ပဲ လက်ထပ်ခဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင် ဆက်ပြီးမြဲအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာ တာဝန်တွေ ၀တ္တရားတွေ အပြည့်ရှိတယ် ။
ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာကော သံသရာမှာကော နှုတ်ခေါင်းရှုံ့ချင်စရာ အ​ကောင်းဆုံး လုပ်ရပ်မှာ ။
အိမ်က မိန်းမက အရင်လို မလှတော့လို့ ဖောက်ပြန်ချင်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ မလှမပတဲ့ မိန်းမက သူ့ကိုယ်သူ ဂရုစိုက်ဖို့ထက် ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်လင် ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးတွေနဲ့ အလုပ်များနေရတာကို သတိရပါ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ . . .
ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကျတော့ တစ်ဘ၀လုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံပစ်လိုက်ရတာမျိုးပါ ။
ယောက်ျားတစ်ယောက် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ နောက်ဆုံး သူ့မိန်းမကိုပဲ ပတ်ဝန်းကျင်က အပြစ်မြင် အပြစ်တင်တတ်ကြတာမျိုးလေ ။
အ၀တ်အစားတွေ တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မရှိတဲ့အခါ အိမ်က မိန်းမက မလုပ်ပေးဘူးလားဆိုတာမျိုး မနက်စာ နေ့လည်စာ အပြင်ထွက်စားတဲ့အခါ အိမ်က မိန်းမက ဟင်းချက် မကျွေးဘူးဆိုတာမျိုး အမြဲအပြစ်ပြောဖို့ ချောင်းနေကြတာပါ နောက်ဆုံးအပြစ်ဖို့ခံရတော့လဲ အိမ်က မိန်းမပါပဲ ။
ကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်တင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပြန်ဘူး ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးတွေ နှစ်ဖက် ဆွေမျိုးတွေ အားလုံးရဲ့ တာဝန်ဟာ မိန်းမ တစ်ယောက်ခေါင်းပေါ်ပဲ ကျလာခဲ့တာလေ ။
ဘာလို့ ဖောက်ပြန်ချင်ရတာလဲ ။ အရင်လို မလှတော့လို့လား အရင်လို မလှတော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူ့ကိုယ်သူတောင် ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်လို့ပါ ။
အရင်လို ဂရုမစိုက်တော့လို့လား ဂရုမစိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး အရင်ကထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးခဲ့ပြီးသားပါ နီးလွန်းရင် မမြင်တတ်တဲ့ လူ့သဘော သဘာဝအရပေါ့ ….ထမင်းစားပွဲအပေါ် အမြဲ အသင့်ရှိနေတဲ့အခါ ဒါဖြစ်နေကျလို့ မြင်သွားကြပြီး ကျေးဇူးတင်ဖို့ သတိမရတော့ဘူး အ၀တ်ဗီရိုထဲက ခေါက်ရိုးကျိုးပြီးသားအ၀တ်အစားတွေကို အမြဲမြင်နေရပေမယ့် အဲ့ဒီအနောက်က စေတနာကို မမြင်လာကြတော့ဘူး ။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်က . . . ထမင်းဟင်းခွက်တွေမှာ တောက်ပြောင်နေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေမှာ ဆေးပြီးသား ပန်းကန်တွေမှာ အစအဆုံးသာ ပြောရရင် တစ်အိမ်လုံးမှာ သူ့အချစ်တွေ သူ့စေတနာတွေချည်းပါပဲ ဒါကို မြင်တတ်ဖို့ လိုတယ် ။
အိမ်မှာနေပြီး ဘာလုပ်ရလို့လဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေ တွေးမိတဲ့အခါ အိမ်မှာ နေပြီး တစ်ရက်လောက် ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တောင် ကူညီပေးကြည့်ပါ ငါ စီးပွားရှာပေးနေတာပဲဆိုတဲ့ အတ္တတွေနဲ့ တစ်ဖက်သတ် မတွေးနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာလဲ စီးပွားရှာတတ်ပါတယ် ။
ဘာကြောင့် ဖောက်ပြန်ကြတာလဲ ။ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမောလှပနေလို့လား ၀တ်တတ်စားတတ်ပြီး ချွဲ့ချွဲ့နွဲ့နွဲ့လေး စကားတွေ ပြောတတ်လို့လား အတိတ်ကို ပြန်တွေးကြည့်ပေးပါ တစ်ချိန်က ကျွန်မတို့လဲ ဒီလိုပဲ ပျော်ဖူးခဲ့ကြတယ် ချစ်လားချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာမှာ ဘာအပူအပင်သောကတွေမှ မပါပဲ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ ။
​ဘာကြောင့်များ ဖောက်ပြန်ချင်ကြတာလဲ ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ . . . လွယ်လွယ်လေးရေးပြီး လွယ်လွယ်လေးဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့ ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ပေါ်က စကားလုံးလေး တစ်လုံးမဟုတ်ဘူးလေ ဘ၀တွေ ရင်းထားတတ်သလို ခံစားချက်တွေလဲ မြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့အရာပါ ။